दाँतको किरा मार्ने अचुक घरेलु उपाय, पढेर शेयर गरौं - Nepal Insider
Home/स्वास्थ्य/दाँतको किरा मार्ने अचुक घरेलु उपाय, पढेर शेयर गरौं
दाँतको किरा मार्ने अचुक घरेलु उपाय, पढेर शेयर गरौं
5,8963minutes read
दाँतबाट किरा हटाउने घरेलु उपाय:यहाँ हामी तपाइँलाई केही घरेलु उपायबारे जानकारी दिन्छौं । जस्ले गर्दा तपाइँको किरा लागेको दाँतमा दुखाई कम हुनुका साथै अन्य दाँतमा यही समस्या हुनुको खतरा पनि कम हुन्छ । किनकी यो समस्या एउटा दाँतबाट अर्को दाँतमा तुरुन्तै फैलिन्छ । जस्को कारणले गर्दा अरु दाँतलाई पनि समस्या गर्छ ।
बेसार र नुन:पिसेको बेसार र नुनलाई तोरीको तेलसँग मिलाउनुहोस् । यस मिश्रणलाई प्रतिदिन २–३ पटक दाँतमा दन्तमन्जनको रुपमा दल्नाले दाँतको किरा मर्दछ ।
प्याज खानाले मर्छ दाँतको ब्याक्टेरिया:प्याजको प्रयोग प्रायजसो दाँतको दुखाई ठिक गर्नको लागि गरिन्छ । तर यसको प्रयोग दाँतको किराको समस्या हटाउन पनि गर्न सकिन्छ । किनकी प्याजलाई दाँतको लागि एउटा राम्रो उपाय मानिन्छ । यस्को प्रयोगले तपाइँको दाँतको दुखाई कम हुन्छ । प्याजलाई एक प्रकारको प्राकृतिक औषधिको रुपमा पनि मानिन्छ । जस्मा दाँतको दुखाई निको पार्ने गुण हुन्छ । यदि तपाइँको दाँतमा पनि समस्या छ भने प्याजको प्रयोग गर्नुहोस् । जसबाट तपाइँलाई लाभ मिल्दछ । यस्को लागि प्याजलाई काटेर सानो टुक्रालाई किरा भएको दाँतबाट चपाउनुहोस् । तपाइँले सलादमा प्याजको प्रयोग गरेर पनि दुखाई कम गर्न सक्नुहुन्छ ।
बरको दुध(चोप) : किरायुक्त दाँतमा बरको दुध लगाउनाले किरा र दुखाई दुबै हट्दछ ।फिटकिरी: फिटकिरीलाई तातो पानीमा घोलेर प्रतिदिन कुल्ला गर्नाले दाँतको किरा र दुर्गन्ध दुबै हट्दछ ।
ल्वाङ्ग: ल्वाङ्गलाई दाँतको दुखाईको लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय मानिन्छ । यस्को साथै स्वस्थ रहनको लागि पनि ल्वाङ्गको प्रयोग गरिन्छ । ल्वाङ्गमा विशेष प्रकारको गुण पाईन्छ । जस्ले ब्याक्टेरियालाई समाप्त गर्ने काम गर्दछ । दाँतमा दुखाई ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा हुन्छ । जस्लाई हटाउने काम ल्वाङ्गले गर्दछ । यसको लागि ल्वाङ्गलाई दुखेको दाँतमा राख्नुहोस् । यसबाट विस्तारै दाँतको दुखाई कम हुन्छ । यस प्रक्रियामा थोरै समय लाग्न सक्छ । तर फाईदा धेरै नै हुन्छ ।
दूधेदाँतमा किरा लाग्न नदिन के गर्ने के नगर्ने ?डा. श्वेता धिताल बाल दन्तरोग विशेषज्ञ
बच्चाको दाँत पाँच÷छ महिनादेखि उम्रिन सुरु हुन्छ । साढे दुईदेखि तीन वर्षसम्ममा उनीहरूका २० वटा दाँत उम्रिसक्छन् । यी सबै दूधेदाँत हुन् । जुन पछि साटिन्छन् । ‘साटिने दाँत न हो, किन सफा गर्नु ? अर्को आइहाल्छ नि’ भन्ने धेरैको धारणा हुन्छ ।बच्चाहरूले आमाको दूध खाइरहेका हुन्छन् । दूधदानीबाट पनि दूध खाइरहेका हुन्छन् । बच्चाको दाँत दूधमा डुबिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको माथिपट्टिको दाँतमा किरा लाग्छ ।
बजारमा बच्चाका लागि नरम खालका ब्रस पाइन्छन् । मन्जन पनि सोही अनुसारका पाइन्छन् । साना बच्चाले थुक्न जान्दैनन् । ब्रस गर्दा मन्जन निल्छन् । फ्लोराइड भएको मन्जन निल्दा उनीहरूलाई असर गर्छ । यसको लागि तीन वर्षमुनिका बच्चाहरूलाई फ्लोराइड नभएका मन्जन दिनुपर्छ ।
बच्चाहरूको दाँत उम्रेदेखि नै सफा गरिदिनुपर्छ । धेरै साना नानीहरूको हकमा कपासलाई नुनपानीमा डुबाएर सफा गरिदिन सकिन्छ । जुन बेलादेखि बच्चाले जुत्ताको लेस आफैँ बाध्न सक्छ, त्यसपछि मात्रै राम्रोसँग ब्रस गर्न सक्छ भन्ने भनाइ पनि छ । त्यसैले राम्रोसँग दाँत सफा गर्न नसक्ने बच्चालाई भने आमाबुबाले सघाउनुपर्छ ।किरा लाग्ने/नलाग्ने कुरामा दाँतको बनावटको भूमिका हुन्छ । कसैले जति चकलेट खाँदा पनि किरा लाग्दैन । कसैकोमा लागिहाल्छ । क्याल्सियमको कमी भएको दाँतमा बढी मात्रामा किरा लाग्छ । दाँतमा किरा लागेपछि पिप जम्छ । दुख्छ । गाला सुन्निन्छ । कसैको त २० वटा दाँतमा १५/१६ वटामा नै किरा लागेको हुन्छ । कसैको दाँतको भित्रसम्म किरा लाग्छ । जसको लागि जरादेखि नै उपचार गर्नुपर्छ । उपचार प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ । सुरुको दाँतमा किरा लाग्यो भने पछि आउने दाँतमा पनि असर पर्छ । बच्चाको दाँतको किरा अरू मान्छेमा सर्दैन । तर, उनीहरूको एक दाँतबाट अर्को दाँतमा भने सर्न सक्छ ।
कहिलेकाहीँ साटिने र नसाटिने दाँतका बीचमा किरा सर्छ । दाँत यताउति सर्ने हुन्छ । बांगोटिंगो हुन्छ । त्यसैले अभिभावकले दूधेदाँत त हो नि भनेर हेलचेक्य्राइँ गर्नु हुँदैन । ठूलो मान्छेले जस्तो सिकायो सानाले पनि त्यस्तै गर्छन् । त्यसैले सानै बेलादेखि ब्रस गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
यस्ता छन् अकबरे खुर्सानी खानुका अचम्मका फाइदाहरु